I-anime ehamba phambili phakathi kuka-2000 no-2010 | Izincwadi Zamanje
Yize ngaso sonke isikhathi kungcono ukuvumela isikhathi sidlule ukuhlola izinto ngesilinganiso sakho, iwebhusayithi yaseJapan iBiglobe yenze esidlangalaleni imiphumela yocwaningo lwabalandeli abangama-4.000 lapho umbuzo wawuthi «Iyini i-anime yakho oyithandayo kule minyaka eyishumi edlule?«, Futhi ohlwini lwama-anime ayizintandokazi angama-50 alesi sampuli yama-otakus aseJapane singabona okulandelayo.
Uchungechunge oluthandayo lwamaJapane ngu Angel beats! , i-anime ekhuluma ngesikhungo sangemva kokuphila esineziqephu eziyi-13 ezavela ngo-2010 futhi ezazisekelwe kwinoveli yango-2009 nemanga eyaqala ngawo lowo nyaka kodwa isaqhubeka. Okwesibili okuhlukanisiwe ngu I-Bakemonogatari, enye indaba yesipoki nenye i-anime emfushane: iziqephu eziyi-12 kuphela, zonke zikhishwe ngo-2009. Ithusi liya ku Clannad, ukujwayela iziqephu ezingama-23 kusuka ngo-2007 kuya ku-2008 kwinoveli ebonakalayo ye-PC, i-Ps2, i-PSP, i-Xbox 360 ne-Ps3.
Ukuthola uchungechunge olwaziwa kangcono yi-otaku ejwayelekile yaseSpain kufanele siye endaweni yenombolo 9, lapho itholakala khona Gintama. I-Fullmetal Alchemist ubesendaweni yesi-12, I-Ghost kuShell: Yima Yedwa Complex uthole owesi-16, Eureka Isikhombisa usesikhundleni 21, I-Black Lagoon y Amaplanethi zingama-24 nama-25 ngokulandelana, mushishi uthole indawo yama-28, Bleach uhlale endaweni yama-36, okwakudala I-Slamdunk ingeyama-38 yize ingeyona eyeminyaka eyishumi edlule kodwa ingeyangaphambilini, ngokushesha ngemuva kwalokho esinayo Uju & i-clover, ibhayisikobho ICowboy Bebop: Knockin 'Emnyango Wezulu ngowama-42, Naruto 43 e inu-yasha 47. Vala ama-50 aphezulu Amantombazane asesibhakabhakeni.
Njengoba sibona, amaJapane anokuthanda okuhluke kakhulu kithina. Kungenzeka kanjani lokho Naruto ube phansi kakhulu, ngokwesibonelo? Futhi kuthiwani One Piece, okungekho ngisho lapho? Kumele futhi senze imiphumela ivuseleleke kucatshangelwa ukuthi okwakamuva kuvame ukuvusa izinkanuko eziningi kunezakudala, kepha uhlu lusinika umbono osondele ochungechungeni okufanele ulucabangele. Uyazi noma yiluphi uchungechunge amaJapane asangana ngalo kakhulu? Yimiphi ongayincoma?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » izinhlobo » Amahlaya » I-anime ehamba phambili phakathi kuka-2000 no-2010
salame kuqala awazi i-ada yama-anime nama-manga ngemibono yakho yokugcina, futhi salame awufundi ukuthi ishumi leminyaka elidlule lithini salamin.
salame kuqala awazi lutho mayelana ne-anime nama-manga (ngemibono yakho yokugcina), futhi awufundi lokho okushiwo yiminyaka eyishumi eyedlule i-salamin.
Ngincoma ukuthi uGintama ahlekise futhi enze futhi i-Fullmetal alchemist nayo inhle kakhulu
kahle eyodwa engangiyithanda kakhulu futhi angizange ngibabone ohlwini kukhona yuyu hakusho, shaman king, thola ababhaki, hellsing, samurai X no-S-cry-ed… bangama-anime amahle kakhulu….
mfowethu iqiniso ukuthi awazi lutho nge-anime kufanele usule le ndoda .. kuyenzeka ukuthi amaJapane athande kakhulu i-naruto bleach phakathi kwezinye i-anime ezigqoka zidayise izinwele zazo njengazo ukuze uzivuselele
I-V Edition yemiklomelo ye-FNAC-Sins Entido de Novela Gráfica